मुख्यमन्त्री रहँदै शेरधन राईले विवाह गर्ने, को हुन् उनको प्रेमिका ? – www.agnijwala.com
मुख्यमन्त्री रहँदै शेरधन राईले विवाह गर्ने, को हुन् उनको प्रेमिका ?
माघ २७, काठमाडौँ । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बन्न पूर्वमन्त्री शेरधन राईलाई बाटो खुलेको छ ।
१ नम्बर प्रदेशको एमाले संसदीय दलको नेतामा सचिव भीम आचार्यलाई २ मतले पछि पार्दै राई संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएका हुन् ।
राई पहिलो प्रदेश सभाको निर्वाचनमा भोजपुर (२) बाट ७१ प्रतिशतभन्दा बढी प्राप्त गरी विजयी भएका थिए । उनि भलिबल, ब्याडमिन्टन र तेक्वान्दोका चर्चित खेलाडीसमेत हुन् । -नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
поисковых санкцииосео оптимизацияв контакте пермьэмиграция в великобританию из украиныпушок Фокин